Dugsiga Sare - Rosemount-Apple Valley-Eagan ISD 196
Barista culimada ee kuliyadda iyo udiyaarga mihnadda
Ardayda dugsiyada sare waxay leeyihiin fursad ay ku galaan koorsooyin kala duwan oo aad u fiican. Gudaha Degmada 196, waxaan leenahay afar dugsiyada sare oo dhamaystiran iyo dugsiga sare magnet deegaanka ee fasallada sannadka saddexaad iyo sannadka ugu danbeeya.
Manhajka asaasiga ah ee ardayda dugsiyada sare waxay si dhow ula socdaan heerarka gobolka oo waxa ka mid ah xisaabta, sayniska, barashada bulshada, iyo farshaxanka luqadda Ingiriisiga. Ardaydu waxay kaloo leeyihiin fursad ay ku doortaan fasallo ka kala duwan meelo la doorto oo ka baxsan meelaha muhiimka ah, kuwaas oo sidoo kale la jaanqaadaya heerarka gobolka iyo qaranka.
Dhammaan manhajka si joogto ah ayaa dib loogu eegaa iyada oo loo marayo habka dib-u-eegista manhajka ee degmada. Waxaa naga go'an inaan diyaarinno muwaadiniinta mustaqbalka oo leh fursado ay ku guulaystaan aan la koobi karayn!
FIIRI KHARIIDADDA IMAANSHAHA DUGSIGA SARE
Kasbo kredhityo kuliyadeed
Dhaqaalaha caalami ee maanta, ardaydu waa inay si fiican ugu diyaargaroobaan rabitaanada kulliyadda iyo goobta shaqada.
Waxaan taageersannahay u-kobcinta ikhtiyaaro badan ee ardayda dugsiga sare kadib. Degmada 196 waxay siisaa ardayda siyaabo kala duwan si ay u helaan kredhityo kulliyadeed iyagoo weli ku jira dugsiga sare:
Ikhtiyaarka diiwaangelinta dugsiga sare kadib (PSEO)
Diiwaangelinta lammaan ee Kulliyadda Iskuulada dhexdiisa
Kredhit Kulliyadeed La-mideeyey
Baro wax badan oo ku saabsan kredhitka kulliyadda >
Ardaydu waa inay si fiican u buuxiyaan 66 dhibcood ee koorsada shaqada heerka dugsiga sare, fasalada 9-12 si buuxda, si ay u qalmaan qalinjabinta dugsiga sare, sida hoos ku qeexan. (Faahfaahinta shuruudahan waxaa lagu daabacay Hanuuniyaa diiwaangelinta dugsiga sare.)
Akhri siyaasadda degmada oo dhan oo ku saabsan shuruudaha qalin-jabinta >
Liiska dugsiyada sare